WARARKA BARAAWEPOST Axad 14 october 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo Ahaasimaha Hayaadda Nabadsugidda oo maanta booqday degmada Wanlaweyn
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed S/Gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye iyo agaasimaha Hayadda Nabadsugidda Soomaaliyeed Dr Axmed Macallin Fiqi iyo saraakiil sare o oka kala socotay qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliyeed ayaa saaka maanta kormeer howleed ku tagay deegaannadii ugu dambeeyey ee laga xoreeyey Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka Shabeelada Hoose.
Kormeerkan howleed oo ay taliyeyaashu ugu kuurgalayeen sida ay Ciidammada ammaanka u sugaan aminga isla markaana ay gacan uga geysanayaan dib u dejinta shacabka dib ugu soo noqonaya guryahooda ee ku yaal deegaannada la xoreeyey dhowaan ee gobolka Shabeelada Hoose ayey ku tageen deegaannada kala ah Yaaq Bari Weyne.Leego,Warmaxan,garoonkii Balidoogle iyo degmada Wanlaweyn.
Taliyaha Ciidammada Booliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Shariif Sheekhunaa Maye iyo Agaasimaha Guud ee Hay�adda Nabad Sugidda Qaranka Soomaaliyeed Eng Axmed Macalin Fiqi ayaa ugu horeyn degmada Wanlaweyn kulan kula qaatay waxgaradka deegaankaasi oo ay kala hadleen sida ay ciidammadu iyo dad weynaha deegaanka isaga kaashaan karaan sugidda amniga.
Iyadoo sidoo kale Taliyaha Ciidanka Boolisku uu kormeer ku sameeyay isla markaana uu soo eegay xaaladda ay ku sugan yihiin dhismeyaasha saldhigyada Booliska ee ku yaal degaamadaas, isla markaana wuxuu taliyuhu qiimeyn ku sameeyay baahida amni e eka jirta degaanadaas iyo sidoo kale tiro intee ah oo ciidan Boolis ah ayaa ku filan i la geeyo degaanadaas.
Taliyeyaasha ayaa sidoo kale garoonka diyaaradaha Balidoogle ee gobolka Shabeelada Hoose waxey kulan kula qaateen saraakiisha Ciidammada Xoogga Dalka iyo AMISOM oo iyagu wadajir faah faahin uga siiyey qaabka uu howlgalkaasi u dhacay iyo waxa xiga mar hadii deegaannadaasi intooda badan la xoreeyey.
Dhinaca kale Taliyeyaasha intii ay kormeerkooda howleed ku guda jireen waxaa degmada Afgooye lagu soo bandhigay rag ka tirsanaa Al-Shabaab oo iyagu ku dhex dhuumaaleysanayey dadka deegaanka gaar ahaan horjoogayaal iyagu iska dhigayey ganacsato kuwaasi oo soo qabashadooda ay gacan ka geysteen rag ka tirsanaa Al-Shabaab gaar ahaan kooxda Amniyaatka kuwaasi oo ay Ciidammada Nabad Sugiddu horey u soo qabteen.